Fiarovana Ny Alfabeta Zeorziana Fahiny ao Anatin’ny Vanimpotoana Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Fiarovana Ny Alfabeta Zeorziana Fahiny ao Anatin'ny Vanimpotoana Nomerika
Voadika ny 15 Marsa 2017 16:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Italiano, नेपाली, Esperanto , English
Alfabeta Zeorziana. Teny iray tao amin'ny fifaninanana “Soraty amin'ny Teny Zeorziana’. Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny ‘Soraty amin'ny TEny Zeorziana’.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra mpiara-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Monica Ellena. Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Mihetsika moramora eo amin'ilay finday tranainy ny rantsan-tànan'i Dato Dolidze raha nanoratra hafatra fohy ho an'ny zanany lahy izy .
Alfabeta Latina fotsiny no amin'ny telefaonako, noho izany isak'izay mila mandefa hafatra aho dia mila mandika ireo soratra Zeorziana o amin'ny teny Latina. Mafy be izany ” hoy ilay 50 taona, mpivarotra voasary ao amin'ny tsenan'ny legioma ao Tbilisi.
Raha manome fahafahana mampiasa ny alfabeta Zeorziana ireo finday avo lenta hiaka farany, maro amin'ny olona any Zeorzia, eo amin'ny 333 Dolara ny karama farany ambany, no mifikitra amin'ny telefaona mora kokoa, antitra kokoa.
Iray amin'ireo tra-pahavoazana tsy niriana avy amin'ny marimaritra nomerika toy izany ny abidia tokan'i Georgia.
Nanitona manampahaizana sy mpikaly soratra nandritra ny taonjato maro io alfabeta Zeorziana miolikolika io, ary vao haingana dia ny UNESCO. Tamin'ny Desambra, nampidirina'ny UNESCO ny abidia Zeorziana ho ao amin'ny listry ny harena ara-kolontsaina tsy azo raisin-tànana ananan'ny zanak'olombelona.
Raha ny marina, mampiasa alfabeta telo ny teny Zeorziana : ny mkhedruli, ilay iray izay ampiasain'ny rehetra amin'izao fotoana izao, ary ny tranainy indrindra, ny asomtavruli sy ny nushkhuri,, nampiasaina indrindra indrindra amin'ny soratra ara-pivavahana sy ny tahirin-kevitra tranainy indrindra. Araka ny nosoratan‘ny UNESCO, miaraka miasa ireo abidia telo ireo noho ireo asany samy hafa ary maneho ny fahasamihafàn'ny maha-izy azy ara-kolontsaina an'i Zeorzia. “
Tsy tena tandinonin-doza io fomba fanoratra Zeroziana io. Fa fomba fiteny mety hisongadina, ampiasaina fotsiny ihany ho an'ny Zeorziana sy izay teny mifandray aminy ao Zeorzia toy ny Mingreliana sy ny Svana, tenenin'ny olona manodidina ny 3,7 tapitrisa na 0,06% ny mponina eto amin'izao tontolo izao. Ary ireo teny izay tsy tenenina firy miha manjavona amin'ny taha iray isaky ny tapa-bolana, ny sasany ao Zeorzia dia miezaka ny mba hahzoana antoka fa ho voaaro mandritry ny fotoana maharitra ny teniny sy ny alfabetany.
“Tena marefo manokana amin'izao fotoana izao ireo fiteny vitsy an'isa, noho izany mila arovana,”, hoy i Nino Doborjginidze, izay mitarika ny Sekoly Ambony Fianarana ny Teny ao amin'ny Anjerimanontolon'i Ilia Chavchavadze any Tbilisi. “Ny tsy fahampian'ny fandrosoan'ny teknolojia ho an'ny fiteny tahaka ireny kosa, anisan'izany ny Zeorziana, dia manelingelina ny fanaparitahana amin'izao tontolo izao ny tahirin-kevitra manandanja sisa voatahiry amin'ny teny Zeorziana any amin'ny haino aman-jery isan-karazany am-bava, vita sora-tanana ary vita pirinty.”
Amin'ireo fiteny 7100 ampiasaina erantany amin'izao fotoana izao, 500 monja no ampiasaina amin'ny aterineto, raha 348 monja no tohanan'ny Google, ilay milina fikarohana lehibe indrindra erantany, araka ny tatitry ny UNESCO nivoaka tamin'ny 2015. Ary maro amin'ireo fiteny izay nahavita niditra amin'ny aterineto aza no manana fetra: ny Zeorziana, ohatra, dia aseho amin'ny alalan'ny endri-tsoratra iray monja ao amin'ny Microsoft Word.
Vokatry ny fetra tratry ny Zeorzia ety anaty aterineto, ny endri-tsoratra Latina no ampiasaina matetika ho solony. Ireo orinasa mpaninjara, torak'izany koa ireo mpanome tolotra, ohatra, dia voasarika hampiasa ny alfabeta Latina amin'ny lahatsoratra fampahafantaran'izy ireo. “25% p’asdaklebas akhal ch’amosvlis” raha tokony ho “25% ფასდაკლებას ახალ ჩამოსვლის” (fihenambidy 25% ho an'ireo mpanjifa vaovao).
Nipongatra ireo ny fandraisana andraikitry ny tsy miankina mba hanohanana ny fahitàna an'i Zeorzia ety anaty tranonkala. Tamin'ny 2015, natsangan'i Zviad Tsikolia, mpamorona endrika indostrialy, ny fiarahana miasa tamin'ny orinasa mpampindram-bola lehibe indrindra any Zeorzia, ny banky TBC, ary nanomboka ny fifaninanana #WriteinGeorgian [soraty amin'ny teny Zeorziana], miantso ny fahaizamamoron'ireo mpirotsaka an-tsitrapo mba hamorona endrika vaovao ho an'ny endriky ny alfabeta. Namaly tamin-kafanampo ireo Zeorziana, ka endritsoratra vaovao 160 no voatolotra tao anatin'ny dimy herinandro.
“Ny tenintsika sy ny abidy antsika no lovantsika; harena sarobidy izay tokony tsy hoe arovana fotsiny izy io fa kosa hotehirizina ho velona sy hohavaozina”, hoy i Tsikolia, 45 taona, mpiaro mafana fo ny fampiasana ny soratra Zeorziana amin'ny fifandraisana isanandro amin'ny aterineto. “Miha-lasa nomerika tsikelikely izao tontolo izao, ary ny tarehin-tsoratra dia tokony ho afaka mivoatra sy mifanaraka amin'ny zava-misy izay tsy amin'ny taratasy fotsiny intsony.”
Hatramin'ny volana Martsa, ho hita ao amin'ny tranonkalan'ny fifaninanana ho an'ny loharano misokatra azo trandrahina ireo teny rehetra, hoy i Tsikolia. “Glocal ny hoavy, ny mpisera eran'izao tontolo izao izay manome lanja ny fomba amam-panaon'ny firenena, ” hoy ny fanamarihan'i Tsikolia. ” Roa segondra no manova ny fitendry Zeorziana, nefa maro ny olona tsy misahirana manao izany akory,” hoy i Tsikolia. (fanamarihana avy amin'ny mpandika: Glocal, entina hilazana ny fisian'ny fifamenoan'ny fanontoloana vokatra iray mba hahomby koka amin'ny fampifanarahana azy aminìizay zavamisy eo amin'ny tsena idirany )
Miatrika olana toy izany i Armenia mpifanolo-bodirindrina aminy, satria izy koa dia manana fiteny tokana miaraka amin'ny alfabeta ampiasaina ho an'ny Armeniana irery ihany.
“Iraisan'ny rehetra ny fanovàna tarehin-tsoratra, indrindra any amin'ireo any am-pielezana, fa tsy ho azy ireo ihany” hoy ny fanazavan'i Vardanyan, tonian-dahatsoratry ny sehatra fampahalalam-baovao media.am. Tsy ny soratra Latina ihany, Ireo Armeniana any Rosia dia hiresaka amin'ny teny Armeniana sady mampiasa ny soratra Cyrillic. Hafahafa fotsiny ny vokany, matetika tsy takatrao fotsiny ilay izy.”
Tahaka ny any Zeorzia, nanao ny dingana voalohany ireo mafàna fo. i Zohrab Yeganyan, mpankafy, tonian'ny asa fanaovana gazety ao amin'ny mpanelanelana momba ny Zon'olombelona any Armenia, dia leo mahita ny teny Armeniana atao tsinontsinona ao amin'ny aterineto, ary nanatefotefoka ny hasosorany tao amin'ny pejy Facebook-ny. “Andeha hataontsika ho andro hanoratana amin'ny teny Armeniana ao amin'ny Aterineto ny 7 Febroary,” hoy izy nanoratra tao amin'ny lahatsoratra iray tamin'ny 2012. Maro be no namaly, na ny tao Armenia na ny tany an-ampielezana.
“Nisy olona izay niteny teny Armeniana fotsiny ary nanapaka hevitra hianatra manoratra amin'ny Armeniana, nanomboka tamin'ny lahatsoratra tao ami'ny tambajotra sosialy,” hoy i Yeganyan tamin'ny EurasiaNet avy any Erevan. Nilaza i Yeganyan fa raha somary tsy dia mavitrika amin'ny fanohanana ilay alfabeta ny governemanta Armeniana, misy fambara kosa fa ny tontolon'ny tsy miankina dia mandray azy tsikelikely. “Vao haingana, nisy orinasa mpivarotra finday nanomboka nandefa hafatra ho an'ny mpanjifany amin'ny soratra Armeniana, ho solon'ny alfabeta Latina,” hoy izy.
Ny tosiky ny be sy ny maro no nanosika ilay soratry ny firenena halaza indray, hoy i Yeganyan, satria nitombo ny olona mahatsapa fa ny alfabeta manokan'izy ireo dia mety mba hanehoana samirery ny feon'ny fitenin'izy ireo.
“Tsy fironana intsony ny fanovàna tarehin-tsoratra,” hoy Yeganyan. Ankehitriny, hoy izy, “mazàna ampiasaina mba hanesoana zavatra na olona izany”.